Taratasy ho an'ny Instagram handikana sy hametahana ▷ ➡️ mpanaraka ▷ ➡️
2 Oktobra, 2019 0 fanehoan-kevitra 100316
1. Soraty ao anaty boaty ilay lahatsoratra tianao.
2. Safidio ny endritsoratra na litera tianao indrindra.
3. Adikao ary apetaho ao amin'ny Instagram anao
Amin'izao fotoana izao ny Instagram dia iray amin'ireo tambajotra sosialy misy fifandraisana bebe kokoa isan'andro, mihamaro ny olona mampiasa ity App ity hahatratra olona maro eran'izao tontolo izao.
Izay no antony nanjary lasa ara-dalàna ny te hanasongadinana mpampiasa mihoatra ny 800 an-tapitrisany ary ilaina ny mahalala fa tsotra sary Tsy ampy io. Ilaina ny hananana fonosana feno dia ny: sary + famaritana.
Satria manan-danja tokoa ny famaritana, ny endriny dia tsy maintsy ho manokana tanteraka, sendra iray amin'ireo fomba hanovana ny endriny ny fampiasana litera tany am-boalohany izay hanome fikitika manokana ny mombamomba anao. Ka fantaro ny tsara indrindra Tononkira Instagram handika sy hametaka.
Inona ny tanjon'ny fanovana ny loharano?
Ny loharanon'ny Instagram Izy ireo dia mamela anao hanana karazany maro kokoa ary mamela ny fenitra ampidirina ao amin'ny Instagram tsirairay amin'ireo singa ireo. Efa ao amin'ireo tantara ny Instagram manana ny fiasa amin'ny fanovana ny endri-tsoratra na izany aza ho an'ny lahatsoratra mahazatra dia tsy manana izany fiasa izany.
Tena ilaina ve ny manova an'ity karazana endri-tsoratra?
Fa tsy maintsy ilaina izany, na izany aza, tsy maintsy ataonao fa afaka manampy anao hanatsara ny habetsaky ny fomba fijerinao sy ny fihetsik'ireo ao amin'ny lahatsorinao tsirairay izany. Misy olona maromaro mampiasa ireo fitaovana ireo mba hanasongadinana ny famoahana azy tsirairay.
Inona ny karazana taratasy misy?
Kaonty Instagram mpanova maro dia afaka manampy amin'ny fanovana ny taratasin'ny fangatahana, ny hany ilainao dia ny misintona ny iray amin'ireo mpanova ireo, apetraho ny anaran'ny taratasy izay tianao indrindra, soraty ny andianteny hamaranana amin'ny alàlan'ny fandikana sy apetaka amin'ny lahatsoratra ny famoahana.
Ireto no typefaces azonao ampiasaina:
Fametahana mainty 【A】 【E】 【I】 【O】 【U】
Fitiavana L ♥ O ♥ V ♥ E ♥
Fametahana fotsy 『A』 『E』 』I』 『O』 『U』
Bubble mainty 🅐🅑🅒🅓🅔🅕🅖🅗🅘🅙🅚🅛🅜🅝🅞🅟🅠🅡🅢🅣🅤🅥🅦🅧🅨🅩
Kianja mainty 🅲🅳🅴🅵🅶🅷🅸🅹🅺🅻🅼🅽🆀🆁🆂🆃🆄🆅🆆🆇🆈🆉
Italiana be 𝘼𝘽𝘾𝘿𝙀𝙁𝙂𝙃𝙄𝙅𝙆𝙇𝙈𝙉𝙊𝙋𝙌𝙍𝙎𝙏𝙐𝙑𝙒𝙓𝙔𝙕
Vola ₳ ฿ ₵ ĐɆ ₣ ₲ ⱧłJ ₭ Ⱡ ₥ ₦ Ø ₱ QⱤ ₴ ₮ ɄV ₩ ӾɎⱫ
Kapoka indroa 𝔸𝔹ℂ𝔻𝔼𝔽𝔾ℍ𝕀𝕁𝕂𝕃𝕄ℕ𝕆ℙℚℝ𝕊𝕋𝕌𝕍𝕎𝕏𝕐ℤ
Fomban'asa mahafinaritra 1 andro lasa izay נ ησρяя
Manoratra tanana 1 𝒜𝐵𝒞𝒟𝐸𝐹𝒢𝐻𝐼𝒥𝒦𝐿𝑀𝒩𝒪𝒫𝒬𝑅𝒮𝒯𝒰𝒱𝒲𝒳𝒴𝒵
Satroka kely ᴀʙᴄᴅᴇғɢʜɪᴊᴋʟᴍɴᴏᴘǫʀsᴛᴜᴠᴡxʏᴢ
Manokana ᗩᗷᑕᗪ EᖴGᕼI ᒍ K ᒪᗰᑎ O ᑭᑫᖇᔕ T ᑌᐯᗯ᙭ ​​Yᘔ
Tandindona ꍏ ♭ ☾◗ € Ϝ❡♄♗ ♪ ϰ↳♔ ♫ ♫ ω⌘☿☡
Nivadika ambony ambany ɐqɔpǝɟƃɥıɾʞlɯuodbɹsʇnʌʍxʎz
Iza ireo mpanova taratasy momba ny Instagram?
Coolsymbol: manana loharano hafa 100 ireo andian-teny tianao.
Sprezzkeyboard: Manana fampiharana sy mpamoaka tranonkala izy, manana loharanom-baovao 50 samihafa.
Lingojam: Izy no mpamoaka lahatsoratra mora indrindra indrindra ary manana loharano maro ho an'ny Instagram.
Ny tsara indrindra dia ireo telo ireo niova fo ireo dia afaka tanteraka.
Taratasy ho an'ny instagram rafitra roa
Ireo taratasy mivalona ho an'ny instagram
ℳ ℬ ℋ ℎ ℐ ℴ ℱ ℰ ℯ ℒ ℓ ℊ ℛ ℛ
Taratasy nasiana faribolana
Taratasy misy fisarahana
Ireo litera miorina ho an'ny Instagram
Nasiana faribolana iray ny isa
Nisy faribolana mainty nofonosiny isa
Fampiasaana azonao ampiasaina
Raha misy antony tsy anaovan'ny fampiharana hafa anao, dia ilaozanao izahay miaraka amin'ireo ohatra fampiharana hafa izay azonao atao mba hanohizanao hamorona ireo karazan-loharanom-baovao rehetra azonao ampiharina amin'ny bokinao tsirairay, ao amin'ny biography ary na ireo hevitrao.
Ny sasany amin'ireo rindranasa ireo dia misy fampiasa maimaimpoana ary ny hafa kosa mandoa vola, ka alohan'ny andoavanao vola feno ho azy ireo dia tsara kokoa raha manandrana ny kinova maimaimpoana ianao ary manamarina raha toa izany tokoa ilay rindranasa mifanaraka indrindra amin'ny publication sy ny fihetsika mety ananany ny mpanaraka anao miaraka amin'izy ireo:
Izy io dia fampiharana izay afaka manova fanovana maro amin'ny tantaram-piainan'ny Instagram, Manana endritsoratra maherin'ny 100 hanovana ny lahatsoratra izy ary na dia misy am-pototry ny sary kely aza izay namboarina miaraka amina sary famantarana ary azonao atao ny manova sy manampy ny zavatra tianao amin'ny zavatra navoakanao.
Ity dia tena fampiharana tsara, manana iray amin'ireo ambony indrindra amin'ny haino aman-jery amin'ny App Store ary manana fonony mihoatra ny 30 tanteraka. Manana litera be dia be koa izay karama sy manan-kery ho an'ny tambajotra sosialy.
Mety ho liana koa ianao frame ho an'ny Instagram.
Ity fampiharana ity dia tena mitovy amin'ny roa teo aloha. Na izany aza, misy tombony lehibe io ary izany dia manana tononkira maimaim-poana tanteraka ity fampiharana ity. Ny endritsoratra dia iray amin'ny be mpampiasa indrindra satria manana ny iray amin'ireo endritsoratra fampiasa indrindra amin'ny Instagram izy io izay litera mivadika.
Manantena izahay fa ireo taratasy rehetra ireo ho an'ny Instagram handika sy hametahana azy ireo dia hanampy anao hanatsara ny famolavolana ny famaritana tsirairay ao amin'ny kaontinao Intagram. Aza adino fa ny mpamadika ireo ihany no miasa raha te hanova fehezanteny na andininy ianao dia tsy manao ny asa avy ao amin'ny fampiharana fa tsy maintsy mandika sy mametaka ny lahatsoratra novaina ianao.
Izany no antony tsara kokoa manandrana ny fitaovana izay nomenay ary lazao aminay ny fomba nifandraisan'izy ireo tsirairay avy ary niasa tsara indrindra ho anao.
1 Inona ny tanjon'ny fanovana ny loharano?
2 Tena ilaina ve ny manova an'ity karazana endri-tsoratra?
3 Inona ny karazana taratasy misy?
4 Iza ireo mpanova taratasy momba ny Instagram?
4.1 Taratasy ho an'ny instagram rafitra roa
4.2 Ireo taratasy mivalona ho an'ny instagram
4.3 Taratasy nasiana faribolana
4.4 Taratasy misy fisarahana
4.5 Bold taratasy
4.6 Litera litera
4.7 Ireo litera miorina ho an'ny Instagram
4.8 Nasiana faribolana iray ny isa
4.9 Nisy faribolana mainty nofonosiny isa
4.10 Isa vitsy
5 Fampiasaana azonao ampiasaina
5.1 Fanalahidy Fonst
5.2 Hafatra mangatsiaka
Septambra 22, 2019
Torolàlana IGTV: Ny zavatra rehetra ilainao ho fantatra momba ny sehatra Video Vaovao ao amin'ny Instagram
Ianaro ny fomba fampiasana ny rakitsary sary Instagram
Jona 16, 2019
Iza no mamonjy ny sariko ao amin'ny Instagram?